August 2012 - iftineducation.com
iftineducation.com – Gudiga Doorashooyinka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa goordhaw shaaciyay xiliga kama dambeynta ah ee la qabanayo Doorsahada Madaxweyne. Kadib kulan Balaaran ay Maanta isugu yimaadeen Xubnaha Gudiga Doorashooyinka ayaa waxa ay ku doorteen Afhayeenka Gudigaasi waxaana loo doortay Xildhibaan Cismaan Libaax oo ahaa afhayeenkii gudigii doorashooyinka ee Gudoonka Baarlamaanka ee dhawaan la doortay. Gudiga ayaa waxa ay shaaciyeen in 10-bisha…
iftineducation.com – Waxaa soo banaan baxay Khilaf Ugub ah oo u dhaxeeya Gudoomiyaha Maxkamada sare ee Dalka iyo Gudoonka Cusub Baarlamaanka Soomaaliya ee Dhawaan lagu doortay Magaalada Muqdisho. Khilaafka labada Dhinac ayaa ka dhashay dib usoo celin ay Gudoonka Baarlamaanka kusameeyeen Xubno kamid ahaa ragaii Maxkamada sare ee Dalka u xukmisay in ay kamid Noqdaan Baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay…
iftineducation.com – Dowlada Britain ama Boqortooyada ingiriiska ayaa Soo Saartay Sharci Cusub oo ku saabsan Arimaha Qooska Kadib Markii ay Waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha soo Saartay In Wixii Laga Bilaabo 09 July 2012 Laga doonayo Ruuxii u Dacwonaya Xaaskiisa Ama Saygeeda in Laga doonayo In Mushaar ahaan uu Qaato Qarash Dhan £18000 Sanadkii Taasoo u dhiganta In Bishii uu Qaato…
iftineducation.com – Shirkad laga leeyahay dalka Japan ayaa waxeey noqotay Shirkadii ugu horeeysay ee soo saarta Mooto leh Musqul oo waliba si caadi ah loo kaxeeysan karo (Toilet Bike Ned). Shirkadaan ayaa Suuqyada gaadiidka ee Caalamka waxeey ku soo bandhigtay awoodeeda cusub. Waa markii ugu horeeysay inta Taariikhda la ogyahay oo Caalamka lagu arko Mooto soconeeysa oo hadane qeeybta lagu…
iftineducation.com – Waxaa soo baxaya Warar ku aadan in Dowlada Kenya ay gadaal ka riixeeso ayna la dooneyso Jagada Madaxweyne ee Soomaaliya mid kamid ahMusharixiinta u taagan Doorashada Madaxweyne kana mid ahaa masuuliyiintii Dowlada ee xiligeeda dhamaaday. Kenya ayaa sida Xog aan ku helnay waxa ay taageerasysaa Raizul Wasaarihii Waqtigiisa Dhamaaday ee Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas kaa ay ka…
iftineducation.com – Kadib doorashadii shalay ee Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo labadiisa ku xigeen ayaa waxaa xigi doona kulan ay Baarlamaanku yeelan doonaan maalinta Khamiista ee berri. Guddoomiyaha Baarlamaanka cusub Proff. Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in maanta ay nasan doonaan mudanayaasha Baarlamaanka maadaama ay shalay oo dhan u taagnaayeen doorashada. Proff. Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa sheegay in maanta…
iftineducation.com – Waxaa Goordhaw soo dhamaatay Doorashada Gudoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya ay u tartameen Dhoor musharax oo u taagnaa qabashada Xilkaasi. Waxaana Gudoomiye kuxigeenka Labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya ku guuleestay Mahdi C/dulle Cawad oo helay codadkii ugu badanaa ee Doorsahada. Waxaana Doorashada Wareega labaad ka tanaasulay Musharixiintii kale ee la baratameysay Mahdi C/dulle Cawad iyagoona sheegay in ay…
iftineducation.com – Waxaa Goordhaw soo dhamaatay Wareegii labaad ee Doorashada Gudoomiye kuxigeenka Koowaad ee Baarlamaan Soomaaliya ay iskugu soo hareen ilaa 4-Musharax oo kasoo gudbiyay Wareegii hore ee Doorashada. Gudiga Doorashada Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa goordhaw Shaaca ka qaaday sida ay codadka u kala heleen afarta Musharax ee ku tartameysay Gudoomiye kuxigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya. Codadka ayaa look ala…
iftineducation.com – Waxaa dib u bilowday Wareega labaad ee Doorashada Gudoomiye kuxigeenka Koowaad ee Baarlamanaka Soomaaliya kadib markii ay isku soo hareen ilaa 4-Musharax . Wareegii hore ee Doorashada waxaa ka qeyb galay ilaa 10-Musharax hasa ahaatee waxaa ku haray wareega hore ilaa 6-Musharax oo helay natiijooyin aad u yar yar. Hada waxaa isku soo haray afarta Musharax ee ugu…